Ifektri yeeMveliso zonyango, ababoneleli-abavelisi beeMveliso zoNyango eTshayina
Izixhobo kuMalungu ezonyango
ISixhobo sezoNyango sePlastiki Isitofu sokuBumba iiNgqwalaselo: Izixhobo kuMalungu oNyango yinkqubo ebaluleke kakhulu apho ukusilela kuphezulu kakhulu. Ke ngoko, imiba emininzi kufuneka ithathelwe ingqalelo ngexesha loyilo, ucwangciso kunye neenkqubo zokuvelisa. Ezi ziquka: Imithetho ye-FDA…
Umngundo wePlastiki Yesixhobo soNyango
I-JS Mold Mold igxile kwi-mold ephezulu yeplastiki yesixhobo sonyango, ukupakishwa kunye nezixhobo zobugcisa industries.We kwakhona inkonzo yeemoto, imveliso jikelele kunye nemveliso yabathengi.
IPlastiki Mold Factory yeMveliso eThengiswayo
IJS MOLD Mold.ifektri eyincutshe ekwenzeni ukubumba kunye nokubumba iplastiki, yafunyanwa eChina ngo-2011. Kule minyaka idlulileyo, besibonelela ngezinto ezahlukeneyo zokubumba kunye neenaliti ezibunjiweyo kubathengi bethu kumgangatho ophezulu kunye nexesha elifutshane. kubunzima kunye nobuchwephesha obuphezulu…
Isixhobo soNyango sePlastiki ngundo
Isitofu soNyango sokuMbumba i-JS UMold Mold inezixhobo zokubumba zeplastiki zanamhlanje ezifumanekayo kwimisebenzi yakho yamacandelo okubumba. Siyazi ukuba umgangatho ngowona ubalulekileyo kwaye sikuthathela ingqalelo oko kuzinikela. Siyinkokeli enexabiso eliphantsi lokungunda kwezonyango ezikumgangatho ophezulu…
Umenzi wePlastiki Isitofu sokungunda
I-JS MOLD Mold yingcali yokwenza inaliti yeplastiki yokubumba emazantsi eTshayina, sigxile ekwenzeni zonke iinaliti zokungunda ezibandakanya inqwelomoya, izixhobo zonyango, umthengi wombane, usetyenziso lweofisi, usetyenziso lwasekhaya, umzi-mveliso, uRhwebo njl.njl. abathengi...
Amacandelo ePlastiki angaphambili nangasemva
Igama leMveliso: Uyilo lwaMacandelo ePlastiki angaphambili nangasemva
Ubomi bokungunda: 100,000-300,000 shots Mold
Ikhava yePlastiki yeeMveliso zonyango
Isigqubuthelo sePlastiki yeeMveliso zezoNyango iJS MOLD Mold ngumvelisi wesiko wokubumba owenziwe ngeeplastiki. Ifumaneka ngobuninzi be-1300 ton clamping force. Iiplastiki ezahlukeneyo ziquka i-PTFE, i-PEEK, i-polymer, i-PVDF, i-PVC, i-CPVC, i-PPS, i-ETFE, i-polypropylene kunye ne-PFA. Imizi-mveliso ebonelelwayo ibandakanya i-aerospace, iikhemikhali kunye nokutya…
Umthengisi waMalungu ePlastiki yezoNyango
Umngundo yi-ISO9001: 2015 yomzi-mveliso onamava aqinisekisiweyo ogxile ekuphuhliseni, ukuyila kunye nokuvelisa imifuziselo yesitofu seplastiki kunye neendawo ezibunjiweyo zezahlulo zeplastiki yezonyango kwizixhobo zokuvavanya, amazinyo, izixhobo zonyango kunye neemveliso zaselabhoratri. Ubunakho: a. Uyilo lokungunda lwezonyango...
Iplastiki yokungunda etofweyo
JS UMold Mold ibonelela ngundo yeplastiki etofweni, kuquka iintlobo zezixhobo zonyango kunye nempilo amalungu eplastiki ngundo, esweni izindlu zeplastiki, amacandelo isixhobo wamazinyo ngundo njl. kwaye udibana nawe…
Isixhobo soNyango seMold Factory esenziwe eTshayina
I-Multi-cavity kunye nokutshintshiselana kuzo zonke iikhrayitheriya eziphambili zokuvelisa ukubunjwa kwesixhobo sonyango. Inkqubo yokubumba ye-JS ivumela ukuba sivelise iimbumba ezikwazi ukubamba i-CPK efunekayo kwishishini lezonyango. rhoqo yakha iipakethe zokubumba ezininzi zeendibano ezipheleleyo zezixhobo zonyango…
I-JS MOLD Mold sisixhobo kunye nomenzi wokungunda obekwe e-GuangDong China. Sigxile ekusetyenzisweni ngokuchanekileyo kobunjwa beZixhobo zezoNyango, iinxalenye zemoto, izixhobo zendlu kunye nezinye izinto. ngamava atyebileyo ekwenzeni iimveliso zokutofa ngobuninzi ngokunjalo. ODM okanye OEM zombini ziyafumaneka. ODM: sine...
Electronics Amacandelo Plastic Button ngundo
Igama leNkampani:Thinkbus Kalung(Dongguan) Manufacturer co.,Ltd (JS MOLD Mold) Uhlobo loShishino:Umvelisi weMveliso ePhambili: CNC Milling, iPlasitiki Mold/Tooling, Prototype,Iinjection yokubumba iMveliso, I-Injection Foaming Mold, 3D Printing,Die Casting,Gas Ukubunjwa kwesitofu esiNcedayo njengenxalenye ye-Auto, Medcial,...
12Iphepha 1/2Iphepha 1/2 QHAGAMSHELANA NATHI
UMBUZO NGOLUHLU LAMAXABISOUMBUZO NGOLUHLU LAMAXABISO